0 Saturday June 06, 2020 - 08:23:11
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Faransiiska ayay ku sheegtay in ay waqooyiga Maali ku dishay amiirkii Ururka Al Qaacidda ee mandiqadda Maqribul islaami iyo dhowr kamid ah kaaliyaashiisa.
0 Saturday June 06, 2020 - 08:05:48
Guuldarrooyin is xigxiga ayaa dhabarka loo saaray maleeshiyaadka uu hoggaanka u hayo dagaal ooge Khaliifa Xiftar oo ka dagaallama wadanka Liibiya.
0 Friday June 05, 2020 - 10:05:49
0 Friday June 05, 2020 - 09:55:52
Musiibo hor leh ayaa ku habsatay dalka Baraaziil ee dhaca qaaradda Laatiin America kadib markii uu cudurka Carona Virus uu ka geystay dhimashadii ugu badneed abid.
0 Friday June 05, 2020 - 09:42:40
Weerarada ka dhanka ah askarta iyo saraakiisha dowladda Federaalka ayaa wali kasii socda xaafado katirsan degmooyinka gobolka Banaadir.
0 Friday June 05, 2020 - 09:29:37
Sheekh Suldaan Muxamad Aala-Muxamad oo kamid ah masuuliyiinta Xarakada Al-Shabaab ayaa dersi uu jeedinayay wuxuu kusoo hadal qaaday cudurka Coronavirus iyo dawooyinka dabiiciga ah ee lagula tacaali karo.
0 Thursday June 04, 2020 - 13:48:16
Xoogaga Al Shabaab ayaa markale weerar ku qaaday qaaday saldhigyada maleeshiyaadka dowladda Federaalka ay ku leeyihiin degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe.
0 Thursday June 04, 2020 - 13:47:28
Wadanka Mareykanka waxaa wali ka socda kacdoonnada ay ka dhigayaan dadka madoowga ah ee looga tirada badanyahay wadankaasi.
« Prev12345678 ... 353Next »